MUM 2014 Top 5
Miss Universe Myanmar Top5စာရင်းဝင်သူများ....
Waist No.2 Shwe Sin Ko Ko
Waist No.4 Sweety Ko
Waist No.6 Zun Than Sin
Waist No.16 Yoon Mhi Mhi Kyaw
Waist No.18 Sharr Htut Eaindra
MUM 2014 Top 10
Miss Universe Myanmar Top 10 စာရင်းဝင်သူများ....
Waist No.9 Queenie
Waist No.12 J Naw
Waist No.13 Poe Kyar Phyu
New Official Crown
Miss Universe Myanmar 2014's New Official Crown.
• Final Show •
Date : 26-7-2014 (Saturday)
Place : အမျိူးသားကဇာတ်ရုံ
Miss Universe Myanmar 2014 ဆန်ခါတင်အယောက်(၂၀)အား Talent စစ်ဆေးခြင်း၊ Personal Interview ပြုလုပ်ခြင်းများကို (၂၁.ရ.၂၀၁၄) ရက်နေ့ နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Info for Full Rehearsal
Miss Universe Myanmar 2014 ဆန်ခါတင်အယောက်(၂၀)၏ ပြိုင်ပွဲအကြို အစမ်းလေ့ကျင့်မှုများကို (၂၅.၆.၂၀၁၄) ရက်နေ့ ညနေ ၅း၃၀ တွင် အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ၌ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Final Show Ticket
Miss Myanmar-Thailand Friendship
• Miss Myanmar - Thailand Friendship Contest - Remembrance Photos •
The Winner of Miss Myanmar - Thailand Friendship Contest: No. 18 Sharr Htut Eaindra
1st Runner-up : No.4Sweety Ko
Contestants 20 - Bagan Souvenir
• ရွှေဂုံတိုင်မိဘမဲ့ကလေးများ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးဂေဟာမှ ကလေးငယ်များ အတွက် မိမိ တို့ အားပေးတဲ့ Miss လေးတွေနဲ့ အတူတူ ပါဝင် ကုသိုလ်ယူ နိုင်ရန် •
ရွှေဂုံတိုင်မိဘမဲ့ကလေးများ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးဂေဟာမှ ကလေးငယ်များ အတွက်
ပုဂံမြေမှ ပြန်လာသော Miss Universe Myanmar 2014 Top (20) Finalist များမှ သူတို့၏ မိသားစုဝင်များ၊ Fan များ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် ချစ်ခင်အားပေးကြသော မိဘပြည်သူများ အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ကာ ပုဂံမြေမှ အမှတ်တရ လက်ဆောင် လေးများအား အပျော်သဘောအနေနှင့် သင့်လျော်သော ဈေြး
ရွှေစင်မင်း အမျိုးသမီး ပရဟိတ ပညာရေးကျောင်း သို့လှူဒါန်းခြင်း
Miss Universe Myanmar 2014 ဆန်ခါတင်၂၀ ဦးသည် ပြင်ဦးလွင် မြို့ရှိ ရွှေစင်မင်း အမျိုးသမီး ပရဟိတ ပညာရေးကျောင်းသို့ လှုဒါန်းငွေ ငါးသိန်းကျပ် (500,000 သိန်းကျပ်) နှင့် ကလေးတစ်ဦးချင်းစီအား တစ်ထောင်ကျပ် နှုန်း အတွက် ငါးသိန်းနှစ်သောင်း (520,000 သိန်းကျပ်) စုစုပေါင်း
မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် အလှမယ်ကိုအားပေးရင်း ကုသိုလ်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အရေး
Miss Universe Myanmar 2014 ဆန်ကာတင်အလှမယ် အယောက် (20)သည် ယခုပုဂံခရီးစဉ်မှ သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပုဂံရောက်အမှတ်တရ လက်ဆောင် များဝယ်လာပြီး အမှတ်တရပစ္စည်းများကို ပရိသတ်များထံအခြေခံ ဈေးတစ်ခု
သတ်မှတ်၍ ပြန်လည်ရောင်းချ မည်ဖြစ်ပါသည်။